トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM isikhathi namandla
umshini pachinko jackpot sinqamukile kuzo zonke ukuphathwa ROM. Uma Minukere isigaba okunamandla ROM, ayanda amathuba ukuthi givin jackpot. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi kukhona isici esigabeni wajula ROM, bese kabanzi incazelo yakho.
ROM sinamandla, izimpawu lula hit jackpot uyaphuma ezihlukahlukene. Ikakhulukazi, ukukhiqizwa futhi sifinyelele, zama ukugxila kanjani hit. Ngokwesibonelo, kuba ukufinyelela kanye nokusebenza, ezihlukahlukene ukukhiqizwa futhi ufinyelele ngeke noma beka njalo.
ngayinye ime ngisho kancane, wena noma ukucwila amamaki ngamunye thembeke e ukushisa okukhulu ukufinyelela. Ngaphezu kwalokho, uba wokudonsa emuva ukunciphisa isikhathi, njll noma kugqugquzelwa round, ngicabanga ukuthi wayeyoba babe inkathi eqinile.
Khona-ke, esikhathini evumayo, noma singase sivele nini is Chang ukukhulumisana futhi, futhi omunye kwesikhathi enamandla ukugeleza ematfuba ukushintshashintsha siyeza kufaka jackpot. Ngokwesibonelo, kunokuba siyeke nje ngoba ayizange yehlele isiteleka ngesikhathi amahora emifushane ukusebenza, imayelana 200 linemibhikisho uzame ukudlala ukubekezela.
phambi liphelelwa ibhokisi, futhi wena izinto ezifana kungenziwa sisuswe big hit, ngicabanga ukuthi kukhona izinto ubhekana. Kulandelwa ukugeleza omuhle, akusiyo umlutha, uma kukhona into efana naleyo eza hit ngisho wayeka masinyane ngayinye elandelayo, kukhona kungenzeka kwesikhathi eqinile.
ume izici onjalo usebenze, kuyoba etafuleni ukuthi kungenzeka beveza sici kwesikhathi eqinile, ngicabanga ukuthi kungase kube ngamabomu ukudlala ngizame.
Khona-ke, ngo-wamakhaza pachinko, kukhona sibalo inombolo okuhlukene. Le modeli singakanani kuyoba sibalo ukuvela sihambe ngokunciphisa ikhasimende. Ngaleyo ndlela-pachinko esitolo, ingabe noma ushintsha izinzipho ukulungiswa kanye nokunye okufana nalokho.
pachinko emakhazeni uhlangothi, uma ungenawo ukushintsha kuyilapho inani labantu okufanele ahlukanisa, nawe ezinsukwini ezimbalwa inkathi evumayo kulandelwa. isigaba okunamandla ROM into nje ukuthi kungabonwa ngokushesha ngokudlala ku. Kuyinto, uma ubheka, ikakhulukazi igrafu idatha, kuyoba lula ukuqonda okwengeziwe.
best sizindza lesicinile kwemininingwane Angathanda ukuba ubone kuyinto igagasi lonke inani ukuvukelwa line igrafu. Njengoba jackpot kulandelwa, zama ukukhetha itafula ijubane elincane ukujikeleza kosuku. Futhi lokho, yesikhulumi ukuthi siyeza ngayinye 200 Ukujikeleza ngaphambi nangemva esilandelayo sokumelela encane umlutha, ake ubeke kungenzeka negagasi eqinile uyeza emkhakheni umbono.
emva kwesikhathi evamile, ngokuqinile ukukhomba umngcele ecasukile-ukuphila, ngakho-ke kubalulekile ukuba ayeke at isikhathi ezingaba yenze inzuzo eningi ngaphandle utshalomali nokumosha.
lapho impilo ejwayelekile, noma ukusheshe ipilwakho kumele babebikezele, isibonelo, ukubhekisela idatha esidlule. Manje, njengoba kunzima ukunquma kuphela ukuziphatha etafuleni udlala, ake kanye idatha ukucacisa ngezindlela ezimbili.